नेपालमा अहिलेसम्मकै ठूलो साइबर आतंक : ५८ वटा सरकारी वेभसाइट ह्याकरको निशानामा ! – NauloKhabar.com
Homeप्रविधिनेपालमा अहिलेसम्मकै ठूलो साइबर आतंक : ५८ वटा सरकारी वेभसाइट ह्याकरको निशानामा !
काठमाडौँ – नेपालमा अहिलेसम्म कै ठूलो साइबर हमला गरेको ह्याकरहरुले दाबी गरेका छन् । आफूलाई प्याडक्स साइबर घोस्ट बताउने ह्याकरहरुले नेपालका ५८ वटा सरकारी वेभसाइटमा एकै पटक साइबर हमला गरेको दाबी गरेको हो ।
यसरी ह्याक भएका वेभसाइटमा रक्षामन्त्रालयदेखि कानुन आयोगसम्मका वेभसाइटहरु रहेका छन् । ह्याकरहरुले सूचीनै जारी गर्दै नेपालका वेभसाइटहरुमा आफूहरुले ह्याक गरेको दाबी गरेको छ ।
यद्यपि, ह्याकरहरुले दाबी गरेको अनुसार सबै ५८ वटा वेभसाइट डाउन भने छैनन् । यसमध्ये केही वेभसाइटहरुमा मात्र ह्याक भएको सन्देश देखिएका छन् भने अन्य केहीमा समस्याहरु देखिएका छन् ।
यसबारेमा प्रहरीको प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेको छ । ह्याकरहरुको फेसबुक पेजमा यसअघि बंगलादेशका वेभसाइटहरु पनि आफूहरुले ह्याक गरेको दाबी गरेका छन् । समस्या देखिएका वेभसाइटहरु :